Iwe wakafa wakagadzirisa kurwisana nekukwegura here? Zvakanaka, mishonga inopesana nekwegura isingatenderi nzira yakatendeseka yekudzosera nguva yako yehupenyu. Ita zvinoona zvinhu zvakakosha zveNicotinamide Mononucleotide (NMN), basa rayo mu senescence, uye nzira yekuwana kurapwa.
Phcoker inyanzvi yekugadzira kugadzira Nicotinamide mononucleotide (NMN) poda
Kukura kwekare hakudziviriki. Zvisinei, pane zvingaita kuti udzore kushandiswa kwekukwegura uchishandisa Nicotinamide Mononucleotide. Bata mabhiza ako nokuti ndichave ndichikupa ruzivo rwakazara pamusoro pemashandiro anoita zvemashiripiti chimiro chinoshanda mukati memasero evanhu.
Bvudzi rakachena rakaenzana nouchenjeri!
Kutenda uku kungangove chinhu chakanakisisa chingaita kuti utaure huru. Kunyange zvakadaro, kunyemwerera kwako kuchava kwenguva pfupi paunotanga kuona mavhiringi pasi peganda rako. Uyezve, kukwegura kunokanganisa zvose zvepanyama nekuziva.
Ngatizvitarisei. Iyo Anti-aging kumeso makirimu uye kuvhiya kwekuzora zvave zviri chinhu mune ino smart century. Izvo iwe zvaunoda kuti uzive ndezvekuti maitiro aya ndeepfupi-kwenguva uye anogona kukonzeresa zvakakomba mhedzisiro.
Zvichida, iwe unofanirwa kurwisana nekukwegura nokutanga unonzwisisa maitiro emagetsi uye ezvepanyama zvinobatsira mune zvinoenderana nemakore. Mushure mezvo, zvinova nyore kudzivisa nzira dzekurwisa senescence. Nicotinamide Mononucleotide inopesana nokukwegura inobatsira kudzorera huduku.
Isu tose tinoda kukwegura zvakanaka, zvakarurama? Zvakanaka, izvi zvinogona kuitika kuti hazvibatsiri kana muviri wako uchiramba uchineta, uye iwe unoguma uri magnetti ese marudzi ose ezvirwere zvemoyo, Alzheimer's, kurasika kurasika, nezvimwewo.
Chakavanzika Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Saka, chii chinopikisana nezvaNicotinamide Mononucleotide? Rega ndikutsanangurire.
NMN iri mune zvose alpha (α) uye beta (β) mafomu. Zvisinei, β-NMN ndiyo fomu inoshanda zvikuru. Iyi bioactive nucleotide inopindirana mu biosynthesis ye nicotinamide adenine dinucleotide kana NAD +.
Izvi zvinowanzoitika kune avocadoes, tomato, cucumber, cabbages, broccoli, uye mbiriso yakasvibirira. Mu laboratori, inowanikwa se nicotinamide mononucleotide yakawanda yehupfu.
Muchikamu chayo chakasvibirira, inoratidza neCAS nhamba, 1094-61-7. Iyo kemikari inovapo kubva mukuita pakati peiyo nucleoside, senge nicotinamide riboside uye neboka re phosphate.
Mune zvidzidzo zvepamberi, Nicotinamide Mononucleotide inoshanda pamakonzo yakaratidza kuve inobatsira mumabasa epamoyo ehutachiona, manejimendi yechirwere cheAlzheimer, chirwere cheshuga chine hukama nezera, matambudziko anomuka kubva mukufutisa, uye cardioprotection. Kunyangwe zvese izvi zviitiko zvezvemakemikari zvakabatana neNicotinamide Mononucleotide, chakanyanya kutsvagisa kuwanikwa kupindira mune zvekurwisa kuchembera.
Mumumuviri womunhu, NMN ndiyo inotungamirira simba mukati memasero. Sezvaunokura, simba remagetsi rinoderera zvichienderana nekuderera kwezinga re nicotinamide mononucleotide uye nekuderedza kunotevera kweNAD +. Kutungamira NMN kuchadzosera iyo nzira uye inopa chikwereti chekushaya.
(1) NMN inoshamisa sei?
Iyi inorwisa kukwegura mishonga inofamba semheni kubva mudumbu ichienda mukutenderera kweropa. Mumaminetsi mashoma, ivo vanenge vatorwa vachienda muropa. Neichi chikonzero, zvinova pachena kuti panogona kusave nechero biochemical reaction inoitika munzira yemamorekuru.
Iko kumhanya kunoshamisa kwaita kuti vaongorori vapedzise mukana wevatakuri, izvo zvinoita kuti sero mafuta aunze. Semuenzaniso, Imai nevamwe vake vakatanga kutsvaga mhinduro kuburikidza neongororo yake ichangobva kuburitswa muna Ndira 7, 2019.
Nekukwegura, muviri unoshandisa imwe NAD + kupfuura yaunogona kugadzira. Zvisinei iwe unoshandisa nicotinamide mononucleotide, maitiro acho acharamba ari kutambisa nguva chero bedzi pasina mamorekuru ekubatsira kutakurwa kwayo. Ramba uchipuruzira kuti usunungure mutakuri asinganzwisisike anozogadzirisa makumi mapfumbamwe muzana ezvinetso zvekukwegura.
Product zita Raw Nicotinamide Mononucleotide (NMN) powder
Solubility Mvura yakasvibiswa
Storage tembiricha -20 ° C
Other mazita · Nicotinamide-1-ium-1-β-D-ribofuranoside 5'-phosphate
Nicotinamide Mononucleotide uye NAD +
zvose zviri zviviri Nicotinamide Mononucleotide uye NAD + inokosha inoshandiswa muzvinyorwa mumasero ekutakura mafuta.
NMN inopindirana mu biosynthesis yaNicotinamide adenine dinucleotide (NAD +). Izvo zvinoshanda se substrate yemakemikisi chaiwo akadai sa nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase, iyo inoshandura kuNAD + mumuviri womunhu. Pamusoro pekunyadzisa, chimiro ichi chinoshandura ku nicotinamide. Zvadaro, inosangana neimwe nzira inogadzirisa inosanganisira nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) iyo inogadzira NMN.
Aya maviri emakemikari akabatanidzwa zvakadai sokuti kusavapo kweumwe wavo kunopikisa mumwe. Tora, somuenzaniso, apo mazinga eNMN achiwa pasi apa, zvichida nekuda kweecenecence, uwandu hweNAD + huchazoguma huchienda.
Sezvaunokura, mamwe maitiro enzymatic anowanzodya NAD + kupfuura muviri unogona kubudisa mafuta. I-sirtuine, NADase, uye poly-ADP-ribose polymerase (PARP) inhengo yemakemikari, iyo inopisa NAD + inotungamirira pakudzorera kwayo.
Zvisinei, kuderera kwemafuta emagetsi hakusi kwaro. Tora, somuenzaniso, kushandiswa kwevane enzymatic inosanganisira PARP kubatsira mukugadzirisa DNA yakaora. Uyewo, siritini inobatsira zvikuru pakuvandudza masero emagetsi.
Kunyangwe paine hukama hwezvemishonga pakati pevaviri biomarkers, haugone kutungamira zvakananga NAD + muchirongwa. Mune zvakawanda senzira yacho inogoneka, mhedzisiro yacho haigone. Semuenzaniso, muyero wepamusoro unoratidzwa nekuneta, kushushikana, uye kusarara. Uyezve, mukomboni haugone kupenyerera kuburikidza neiyo plasma membrane.
The anti-aging Nicotinamide Mononucleotide inowanikwa semuromo wemishonga. Kupindira kwaro kuburikidza nematombo mudenga uye kupinda mumhepo inotenderera kunotanga mumaminitsi matatu. Ne 15th min, zvese zvichange zvatorwa. Chidzidzo chakazara naImai nevamwe vake vaongorori vanoona kuti pane puroteni inokoshesesa mwero wekukurumidza wekutapa.
Pamusoro pekusimudzirwa mukati memaviri, NMN inoshandura nyore kuNAD + kuitira nyore kuchengetedza. Izvozvo zvinogona kutora kusvika hafu yeawa. Iko kusungirirwa kweNAD + kunowanikwa mumasumbu emakumbo, mutsvuku weadipose, chiropa, uye cortex. Zvisinei, kwenguva yakareba utungamiri hweNicotinamide Mononucleotide yakasimudza nhamba yeNAD + mune dzimwe nhengo dzakadai seharuvara rweadipose tissue.
Mumasero emamamalia, kune matanho matatu akasiyana emagetsi ekubhadhara NAD + kukwana.
De Novo ishoko reLain, rinoreva "kubvira pakutanga." Pano, nucleotides inobva ku tryptophan kana nicotinic acid, iyo inowanzobva kuNMN-rich food.
Mumugwagwa uyu, kuenzaniswa kwebhiyochemical basa kunotungamirira pakuumbwa kwe nicotinic acid mononucleotide, nicotinic acid adenine dinucleotide, uye pakupedzisira zvakatarisira NAD +. De Novo inobereka pamusoro pe15% yehuwandu yemafuta.
Pano, nzira inozorodza nucleosides mumamiriro ezvinhu apo DNA inoputsika. Iyo inofanirwa kupfuura 80% yeNAD yose, + iyo muviri wemunhu unoda kuti zvibatsire. Nzira iyo inoshandisa zvose nicotinic acid uye nicotinamide kuti inogadzirisa NAD itsva.
Nicotinate phosphoribosyltransferase inokurumidza kugadzirwa kwe nicotinic acid mononucleotide kubva kunicotinic acid. Pakupedzisira, nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1 inobatsira kuwedzera adenylation yemugumisiro unoguma kune nicotinic acid adenine mononucleotide, uye pakupedzisira kuNAD +.
Basa reNMN pamunhu rinoenderana nenzira iyi.
Nicotinamide Riboside mumwe muchengeti weNAD +. Pamusoro phosphorylation pamberi pe nicotinamide riboside kinase, iyo biomarker inobereka NMN isati yasvika kune imwe shanduko yeanzymatic kuNAD +.
Nhoroondo yeNAD + neNMN muKutsvakurudza
Kwemakore, chidzidzo nemishonga inoshandiswa ye nicotinamide adenine dinucleotide uye yakagadziriswa kwayo yave iri hasha dzose. Zvisinei, unofanira kuziva kuti izvi kurwisa-kukwegura kuwedzera zvave zvakanyanyobatwa mukutsvakurudza kubva mukatikati me-1900s.
Muna 1906, nyanzvi dzekutanga dzakaratidza kuti NAD + yakakurumidza kuvirisa muviramu. Pakupedzisira, dzimwe nyanzvi dzechikemikari dzakatevera zvakaenzana nekuzvichengeta se nucleotide.
Achishandisa tsvakurudzo yake mu1937, Conrad Elvehjem akawana kuti nicotinamide uye nicotinic mavitamine uye zvinogadziriswa zveNAD +. Gare gare, akawana kuti idzi idzi dzinogona kuderedza pellagra mumbwa. Chikonzero ndechekuti mazinga e nicotinic acid uye nicotinamide aiva pasi pepamusoro kune vanhu vanotambura nechirwere.
Muna 1963, timu yemasayendisiti yakasimbisa kuti Nicotinamide Mononucleotide inoshanda pamakonzo yaizosimudzira ma enzyme anoenderana neDNA, ayo aive akakosha mukusimudzira mashandiro emagetsi. Makore maviri gare gare, vamwe vaongorori vakaunza pachena iyo NAD + biochemical nzira dzinosanganisira tryptophan uye nicotinic acid.
Kubvira ipapo, biochemist vakaramba vachiratidza kufarira kuNMN uye NAD + tsvakurudzo. Munguva ino, chinonyanya kukoshesa ndechekukosha kweizvi anti-aging-old drugs muhupenyu hurefu uye kukanganisa matambudziko anemakore.
Tsvakurudzo yezvino yeNicotinamide Mononucleotide Work paMice
Kune zviverengero zvisingaverengeki zvidzidzo pamakorini emurine anoratidza kubatsira kwechirwere cheNicotinamide Mononucleotide (1094-61-7).
Ngatitarisei kune vashomanana, izvo zvakagadziriswa muhupenyu hwemagetsi.
(1) Maererano naSinclair, NAD + iri Tsime Rokuyaruka
Dr. Sinclair nevamwe vake vakabudisa zvidimbu zvitsvakurudzo pamusoro pekugona kwe nicotinamide mononucleotide uye NAD + pakuchinja kukwegura. Maererano neongororo yake ye2013, Sinclair neboka racho vakaona kuti mishonga yeCNNX yekare yemwedzi yakatora NMN kwemazuva matanhatu yakaratidza kuvandudzwa kwemasimba, simba, uye kutsungirira.
Gare gare mune pepanhau rekuongorora re 2016, boka racho rakatsigira kuti NMN yakave nezvibereko zvakafanana sekuita. Panzvimbo pokumhanyira pane rimwe zuva, iwe unogona kuve nemigumisiro imwechete apo iwe uchishandisa Indotinamide Mononucleotide zvinowedzera.
Maererano neHarvard Geneticist, the NMN inoshanda pavanhu inotenderera mberi inofadza kukwanisa kuteerera ropa kune vakwegura nevatambi vemauto.
(2) Mishonga Inofunga kuti NMN Inoderedza Physiological Inopera Mukukwegura Mice
Mukutaura kuongororo ye 2016, Mills et al. akawana kuti kurapa kweNMN kunopesana nekuderera kwezvinhu zvose zvehuviri uye zvekuzvidzivirira mumashandi akare. Pakuguma kweNMN kuwedzera kutsvagisa, iwo makonzo akanyoresa kuwedzera kwekutaura kwema immune immune, kuwanda kweLymphocytic, uye shrinkage mune neutrophils.
Pakutanga, mu2011, Mills, Yoshino, naImai vakashandisa mbeva mhando kuratidza basa reNAD ​​+ mukurapa chirwere chinosemesa uye chakabatana nezera. Mune imwezve ongororo ya2016, akabatana maoko nevamwe vaongorori vakasimbisa kuti NMN yekuwedzera yaigona kurwisa oxidative kusagadzikana uye kusagadzikana kwevascular mumakonzo akura.
(3) NMN Inokonzera Matambudziko eAlzheimer (AD) mu Murine Models
Muna 2015, Long et al. akaongorora mhedzisiro yeNMN pahuropi mitochondrial yekufema kushomeka pamakonzo ane chirwere cheAlzheimer. Chikwata chakacherekedza kuti kurapwa kweNMN kwakakwanisa kurapa etiology yeAD, kusanganisira yakaderera OCR (oxygen oxygen rates), NAD + falloff, uye mitochondria kusagadzikana.
Muna 2016, Wang nevamwe vake vakaburitsa kutsvagurudza kwavo, vachipedzisa kuti izvi Anti-aging zvinodhaka zvinorwisa kugona kwekuziva uye kwehuremu, izvo zvinokonzerwa ne β-amyloid (Aβ) oligomer. Iyi protein yeA is ine neurotoxic uye inokonzeresa kugadzirwa kwedombo muuropi hwevarwere veAD. Wang et al. akagumisa kuti hutongi hweNMN mumakonzo hwakatungamira kudzikira kweAβ oligomers, nokudaro zvichisimudzira kugona kwekuziva.
Kutevera ongororo ya2017, Hou nevamwe vake vakaona kuti NAD + yekuwedzera yakadzora kugadzirwa kwe β-amyloid oligomers. Gore rakatevera, Yao nechikwata chake vakasimbisa kuti Nicotinamide Mononucleotide inoderedza kuunganidzwa kweAβ uye synaptic kurasikirwa mune AD-Tg murine mamodheru.
(4) NMN uye Cardio-kudzivirira
Zvinoenderana nebhuku ra2014 naYamamoto nevamwe vake, NMN inodzivirira moyo pakurwisa ischemic uye kuwedzerwazve. Pamberi peichi chidzidzo, Yamamoto aive chikamu cheboka ra2012, iro rakaona kuti NAD + inoverenga kudya-kunokonzera kufutisa mumakonzo.
Muna 2016, De Picciotto et al. uye vamwe vake biochemists vakadzidza mhedzisiro yeNMN yekuwedzera pane yevascular mashandiro emakonzo ekukwegura. Kubva pane fungidziro, nicotinamide mononucleotide yakaratidza kushanda mukudzora kusagadzikana kwevascular, kushushikana kweiyo oxidative, uye kuderera kweelastin.
(5) Kuwana paNzira Itsva yeMagetsi Anounzwa neShin-Ichiro Imai
Mutsvakurudzo ichangobva kuitwa, boka reasayendesi rakatungamirirwa naImai rakawana uye rakazarura mutori wekushamisa weNMN mumasero.
Iyi NMN yekuwedzera tsvakurudzo yakatanga kuwanikwa munaJanuary 2019 mukati Chimiro cheMetabolism. Imai akasimbisa kuti puroteni yakadaro, Slc12a8, inokonzera kukurumidza kushanduka kweNMN kusvika kuNAD + uye kuitakura iyo muchitokisi. Iyi enzyme inowanikwa kune vanhu vekare panzvimbo yevanhu vaduku kana vane utano.
Muzvidzidzo zvese zvepamberi, masayendisiti ekutsvagisa aizoputsa matanho anozivikanwa enicotinamide mononucleotide poda yakawanda mumvura asati avapa kumakonzo.
Kubatsirwa kwaNicotinamide Mononucleotide (NMN)
NMN ine mabasa akawanda ekurapa uye migumisiro yemishonga pamuviri womunhu. Mumasvondo anopfuura gumi, masayendisiti akazvitsaurira nguva yavo yekudzidza zvose zvinonzi Nicotinamide Mononucleotide kusanganisira nzira dzinotsanangura kukwegura uye zvirwere zvine chokuita nemakore.
Ngationgororei zvakanakira mukomboni muhurongwa hwevanhu.
(1) Kuenderera mberi Kwemagetsi Maitiro
Kusvikira pakatanga ye 21st muzana remakore, nyanzvi dzaive nezvikonzero zvakakwana zvekuratidza kukwegura sekusagadziriswa. Zvisinei, chirevo ichi chave chisina maturo nekuda kwekutsvaga kwekutsvaga kwe kurwisa-kukwegura kuwedzera saNicotinamide Mononucleotide.
NMN yakaitika-inowanzoitika mumasero evanhu uye inokonzera biosynthesis yeNAD + nekugadzirwa kwesimba. Sezvaunokura, izvozvi zviviri zvinokonzera kupera zvichiita kuti kuregererwa kwemasero ekudzivirira. Yeuka, majekiti aya anoshandisa mafuta anokwana zvakakwana kuti adzokere nguva dzose, uye naizvozvo, kuwa kuchapfupisa kupera kwemasero.
Kutarisira zvinoshandiswa kupikisa zvinodhaka zvinodhaka zvakadai seNMN zvinodzokorora hutachiona uye kunonoka kukwegura.
(2) Kusimudzira Masero Evechiduku Masimba Nhamba
Iko kunotangira zvirwere zvakawanda zvinokonzerwa nekukwegura zvakaderedzwa kusvika pamasero emagetsi. Kupera kwekugadzirwa kwemasimba mukati memasero ndicho chikuru chinokonzera zviratidzo zvekare.
Kuva muchengeti weNAD +, NMN inobatanidzwa mukuchengetedza zvakakwana simba remagetsi emitochondria. Kukwegura kuchaita kuti kuora kwekupedzisira kweNAD + kuwedzere. Somugumisiro, kukwegura kunotora nguva inotungamirira kukukura kwezvirwere zvekukwegura.
Dhesi mumasero emagetsi anowanikwa mukati memitezo inokosha yakadai semasumbu, midzi yeropa, itsvo, chiropa, kana pancreas zvinopanganisa nguva dzose hutano hwepanyama nehupfungwa. Ndechikonzero chechikonzero ichocho zvirwere zvakadai se ischemia, mamiriro ezvinhu emwoyo, hosha kusakundikana, zvinetso zvehutano neurodegenerative, uye vamwe vanopfura.
Mhinduro yakakwana ndeyekuwedzera iyo yemuviri Nicotinamide mononucleotide uye NAD + nekunze kurapwa kweNMN. Izvi anti-kuchembera mishonga inopa hutsva hutsva hwehupenyu kumasero ekukwegura, ayo anozoisa pakuonekwa kwevechidiki.
(3) Kuvandudza Ropa Rokufamba
Chimwe chekuchinja kunoitika munguva yekare ndiko kuderera kwehutano hwemidziyo yeropa mukati memuviri wemamamalia. Nokudaro, chirwere chekufamba-famba chinowedzera matambudziko paunotakura mishonga, okisijeni, kupisa, kana kubvisa tsvina kubva munhengo. Sezvo mamiriro acho ari kuramba achiwedzera, inowedzera kupfuura nguva inotungamirira kuitika kwezvirwere zvekare.
Nicotinamide Mononucleotide haisi iyo yakananga inokonzerwa nekugadzirwa kwemidziyo yeropa. Rega nditaure. Iyo pirasi inogadzira NAD +, iyo inoshandisa sirtuin deacetylase (SIRT1) protein.
Mukutaura, SIRT1 deacetylates lysine marara anobatsira mukugadzirwa kwemhepo yakasununguka pasina radicals. Iyi nzira inorwisana nepamusoro inokonzerwa nekushungurudzika kwepfungwa, reperfusion, kana kukuvara kweeschemic. Muzviitiko zvinowanzoitika, mutumbi pachawo pachawo unopedza kugadzirisa ischemia uye mamiriro akafanana kuburikidza ne ischemic preconditioning (IPC). IPC ichazoita zvekusimudzira kushandiswa kweSIRT1.
Iwe unogona kana kutungamirira NMN mushure mechiitiko chechiitiko chinenge chiripo kana panguva yekuratidzwa kwayo. Pamberi pazvinoitika, kemikari inopa cardio-kuchengetedzwa nekuwedzera huwandu hweAATP kuburikidza ne glycolysis.
Panyaya yeIschemia, unogona kushandisa Nicotinamide Mononucleotide sezvo ichikonzera acidosis uye ichikonzera kusagadzikana kwemitochondrial; saka, kuvimbisa kuchengetedzwa kweiyo yemoyo system.
Chii chaunotarisira kana kuyerera kweropa kuchidzikira? Zvakanaka, iyo nyika inozotungamira mukurasikirwa nemhasuru. Pasina kupokana uchacherekedza vanhu vekare vane kuita kushoma, kushivirira kwakadzika, kusasimba, uye vakaneta zvakanyanya nguva dzese.
Chimwe chekuvhuvhuta kwakawanikwa naDr.Sinclair chakanangana nekushanda kweNMN mukusimudzira mhasuru simba. Sekureva kwake 2013 uye ongororo dzichangobva kuitwa dza2018, mbeva dzekare dzakaburitswa nemazuva manomwe ekurapwa kweNMN vakagwinya uye vachishanda sevamwe vadiki.
Nhengo dzemuviri uye kutsungirira kwemiseve yakare-kare (30-mwedzi yekare) yakanga yakafanana neyemwedzi wechidiki wemwedzi mitanhatu. Aya makore akaenzana nemakore anenge 70 uye 20 mumakore. Kubva pane zvakawanikwa, unogona kuderedza kuti NMN inoshanda kuvanhu ichokwadi sefa.
(5) Kurwisana Neurodegenerative Matambudziko
Uropi hunoita sewe simba remaitiro ako. Izvi zvinogona kuva chikonzero nei vanachiremba vacharamba vachivimba neuropi mabasa pavanenge vachizivisa nguva yekufa.
Kuwedzerwa kwezvikamu zveNAD + muuropi zvinopindira utano hwekufunga pakati pevakwegura. Kutungamirirwa kweNMN kunowedzera NAD + kubudisa, saka, kuchengetedza mabasa eeural.
Zvidzidzo zvizhinji zvinoratidza kuti Nicotinamide Mononucleotide inobatsira kuziva, kurova sitiroko, uye kunokanganisa kuyeuka kwendangariro, uko kuri kwakawanda nekukwegura. Pfupi, izvi Anti-aging Kuwedzera kuri kukonzera kuchengetedza kweeuroni.
NMN inonyanya kunongedza etiology yechero ipi yakapihwa mamiriro etsinga. Semuyenzaniso, Alzheimer's chirwere chinoitika nekuda kwekuderera kweNAD +, yakaderera mwero wekushandisa kweoksijeni muuropi, uye zvisizvo zvemitochondrial. Kuwedzera huwandu hweNMN mumuviri kuverenga zvese izvi mhedzisiro.
Sekureva kwechidzidzo chakaburitswa muna2012, Nicotinamide Mononucleotide inonyatso gadzirisa kukuvara kwemukati, izvo zvinowanzo kutungamira mukurohwa. Mbeva dzekare dzaive pasi peNMN muyero yakanyoreswa kunatsiridza mukukanganisa kweNAD + kugadzirwa. Aya mamodheru ekutsvagisa aive nekuchengetedzwa kwakanyanya kurwisa ischemic sitiroko, kufa kwerufu, uye kuzvimba kwetsinga.
(6) Kuvandudzwa kweMetabolism muAgreat Age
Vanotsvakurudza vanoverengeka vakadzidza uye vakaratidza kuti NMN inobatsira kushushikana kweglucose nekusimudzira kusagadzikana kweshuga pamakonzo ekukwegura nekudya kusina kunaka. Ichi chidzidzo chinoshandawo kune vanhu vakwegura vanokura chirwere cheshuga zvichida nekuda kwehuga hwepamusoro kana kusadya kwakashata. Uyezve, kudya kunowanikwa mumafuta kunoita kuti insulini isaramba.
Nicotinamide Mononucleotide inotsigira kukwidziridzwa kweNAD +, izvo zvinoita kuti kuderedza kuputika kwechizvarwa ichi pachinatsiridza kushandiswa kwe insulin muzvikamu zvakakora.
(7) Kurapa kwechirwere cheshuga
Vanhu vane Type II cheshuga vanogara vachiratidza kuramba insulin. Hunhu uhu hunokonzerwa nekudonha muNAD +. Nekuda kweizvozvo, maseru anowana oxidative kusagadzikana uye kuzvimba. Kana iwe uchiri mudiki, iwo muviri unozozvimutsiridza pachawo kuburikidza nemamwe maitiro ehupenyu hwepanyama. Nekudaro, nekukwegura, mazinga eNAD + anoderera munhengo dzinotsigira hupenyu kunge mhasuru, chiropa, huropi uye rwatata.
Chimwe chinokonzera chirwere cheshuga chine chekuita nezera kudya kwakakora-mafuta. Mari isina kujairika yemafuta akazara inodzivisa iyo biosynthesis yeNAD +. Nechinangwa chekuratidza kushanda kweNicotinamide Mononucleotide mukurapa zera uye kudya-kwakakonzera chirwere cheshuga, Yoshino nevamwe vake vakashandisa mbeva mbiri.
Mushure mekupa muyero wezuva nezuva weNMN kwemazuva anosvika gumi, vadzidzi vakagadzira kuti mbeva, dzaiiswa kudya kwemafuta akawanda, dzakanyora kusagadzikana kwe insulin. Kune rimwe divi, mbeva dzeshuga dzakaratidza kuwedzera kukuru muhyperlipidemia.
(8) Kuchinja Kukwegura
Utano husingaperi huripo hunoenderera mberi nekugona kwekukwegura. Sezvo mutumbi unotarisana nehuwandu hwekuchinja kwehupenyu, mamwe emagetsi anoshandiswa kuti adzoke shure. Tora, somuenzaniso, mazinga e nicotinamide adenine dinucleotide anoderera muzvikamu zvakasiyana, zvichiita kuti kuderera kwekugadzirwa kwemajini nemitochondrion yesero.
Kukwegura kunotarisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvakadai sokukuvadza DNA pamusana pemafuta asina kukonzerwa, kushungurudzika kwevascular oxidative, nezvimwe zvinetso zvekuziva. Unoziva chii chinoitika? Zvakanaka, kune DNA-kugadzirisa mapuroteni (PARP1) muhutano hwevanhu. Munyaya yeDNA kukanganisa, NAD + ichaita kuti puroteni iyi igadzire kugadzirisa seni inobatwa.
Tsvakurudzo dzinoverengeka dzakauya neyicinaminamide mononucleotide inobatsira mukukwegura. Semuenzaniso, Mills nevamwe vake vaishandisa mbeva mhando kuti vaongorore mhedzisiro yeNMN zera-rakakonzera kuderera kwemuviri.
Muchidzidzo chacho, vatsvakurudzi vakaona kuti nguva refu yekushandiswa kwekurapa kwakatungamirira kukwidziridzwa kwemajeni akanganisa mukati mechiropa, masaga, uye adipose tissue. Uyezve, zvakawanikwa zvakasimbisa kugadziriswa kwemashoko ekuzivikanwa kwemuviri, kuwedzera kwe lymphocytes, uye kushandiswa kweeukocytes.
Chimwe chimiro chekukwegura ndiko kuvapo kwemavara-mavara muziso reziso. Iyi mamiriro pamwe nehutachiona hwemapfupa ekuderera uye kusakwanisa kubereka misodzi zvakadzidzwa zvakakwana pamakonzo. Masayendisiti akacherechedza kuti mishonga, iyo yakaiswa pamutambo weNNN mwedzi we12, yakave nemamiriro ezvinhu ese pamusoro apa akadzoka.
Nguva refu ndeye chikonzero chikonzero nei vanhu Tenga Nicotinamide Mononucleotide.
(9) Kurapa Kwekuwedzera
Kune vakwegura, NMN inogona kuderedza kusvika ku10% yemutengo wekutanga wekutanga kunze kwekuwana nzvimbo yepakati pakati pekudya nekukura. Izvo zvinokonzerwa nekunyanyisa kwehutano uye chirwere cheshuga zvakabatana. Pasi NAD + mazinga anounza kusagadzikana kwemitochondrial; saka, kuderera kwekugadzirwa kweAATP.
Kuwedzera kwehuputi kunorema kukwanisa kwemitochondria mukugadzira ATP simba dzemasero. Kana ukangobata Nicotinamide Mononucleotide, mushonga unozovandudza kusagadzikana kweglucose uye mamwe mabasa ekugadzirisa ane chokuita nekuwedzerwa.
Kana zvasvika pakuvandudza kuyerera kweropa, NMN yekurapa yakawandisa inoita zvakafanana nekudzidzira. Piritsi rimwe chete raizoita sekushandisa treadmill zuva nezuva. Nekudaro, mutsauko unouya muzvikamu zveNAD + zvemukati munhengo dzemuviri. Ipo Nicotinamide Mononucleotide inowedzera NAD + mune zvese chiropa uye mhasuru nyama, kurovedza muviri kunongovaka mukomboni mukati memhasuru.
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Inonyatsoshanda Munhu Here?
Zvakanaka, uyu unogona kunge uri mubvunzo uripo unorira mumusoro mako. Chero zvazvingaitika, zvese zvekutsvaga uye zvePaclinical zvidzidzo zvakanangana neNicotinamide mononucleotide neNAD + yanga ichinongedzera mamoline mamodheru.
Kana iwe uine maitiro pamusoro pekushanda kweNMN kushanda kune munhu, hezvino zvose zvaunoda kuziva. Dr. David Sinclair, muongorori mukuru, uye geneticist paHarvard University ndeimwe yevakagamuchira NMN.
Sinclair anoreurura kuti anotora chinowedzera. Parizvino, iyo nyanzvi haina kunyora chero guva nicotinamide mononucleotide mhedzisiro. Pane kudaro, anozviti anonzwa kunge mudiki nepfungwa dzakapinza. Hangovers uye jet lags ikozvino yapfuura nguva kwaari. Anoenderera mberi achiti baba vake, avo vava nemakore makumi manomwe ekuberekwa, vanotorawo chinowedzera.
Uyezve, Dr. Sinclair akashandisa kurapwa semuedzo wokutanga paBrigham nevakadzikadzi chipatara. Ane zvirongwa zvekuenderera mberi kuongororwa kuwedzera kune vakwegura vakwegura. Kunyange zvazvo chidzidzo chake chekutanga chizere, iye achiri kutoita bhuku rinozivikanwa. Sinclair akatanga chirongwa chechipiri chechirwere ichi NMN supplement tsvakurudzo muna 2018.
Mune kiriniki yekudzidza iyo inokodzera pane 1st June 2020, vatsvakurudzi vari kutarisa kuti vagadzirise kuchinja kwekunzwisisa uye beta-cell inoshanda neNMN kuwedzera kwevanhu. Nyanzvi dzinobva kuWashington University School of Medicine uye Keio University School yemishonga muTokyo.
Mukuedzwa kwevanhu kwakasimuka ku2016 kuKeio University, vadzidzisi vakanga vachitarisa kuongorora kuchengetedzwa kweNMN mune vanhu vakuru vane utano hwakanaka. Muchikamu chechipiri chinopfuurira, sangano rimwechete, rinotungamirirwa naShin-Ichiro, riri kuongorora nguva refu yeNMN yekutonga. Zvakare, boka racho riri kutsvaga kuongororodza zvirongwa zvinokonzerwa nehutachiona-zvirwere, NMN kinetics, uye zvinodhaka zvinokonzera glucose metabolism.
Muchikoro cheC2017 chidzidzo neYunivhesiti yeWashington, vatori vechikamu vaisanganisira vakadzi vechi50 vane makore 55 kusvika kuC75. Dare racho rakaiswa pamutengo wezuva nezuva we250mg weNMN kwevhiki masere. Kunyange zvazvo vaiva vanhu vane hutano, vakadzi ava vainge vaine huwandu hwehutachiona hweropa, triglyceride, uye BMI. Dzidzo haisati yakwana.
Sezvazvino, hapana zvinyorwa zvinotsigira basa reNMN pamunhu. Nekudaro, iwe unofanirwa kusungirira nekuti chimwe chinhu chiri kubika uye zvekuchipatara miedzo inogona kunge ichivimbisa.
Nzira Yokushandisa Nayo Nicotinamide Mononucleotide (NMN) YeAn anti-Aging?
Kana uri kutarisa kutenga nicotinamide mononucleotide, kune zvinhu zvishomanana zvaunoda kuziva.
Iwe unogona kungotora kurapwa sekuwedzera kwezvokudya sezvo zvisingati zvagamuchira kubvumidzwa kwekupedzisira kweDAA kuva mishonga yemishonga.
Nhamba yacho iri pakati pe25mg uye 300mg zvichienderana nehutano hwehutano hwaunoda kubudirira. Zvisinei, vamwe vanhu vanobvuma kutora kusvika ku1000mg pazuva. Tora, somuenzaniso, Dr. Sinclair anotora 750mg / zuva. Kunze kweizvozvo, anowedzera hurumende iyi ne resveratrol uye metformin.
MuNMN kliniki miedzo, vazhinji vatsvakurudzi vaizoisa zvidzidzo zvavo pamutengo we100mg kusvika 250mg.
Mhemberero vs. Shanduro
Kana iwe uchida kuwedzera kuwedzerwa kwebasa rekuwedzera, iwe unofanirwa kutenga mahwendefa eNikotinamide Mononucleotide nokuda kwekunyorwa kwemashoko ekunyora. Kushandisa mishonga nomuromo kunoderedza kushandiswa kwemuviri. Chikonzero ndechekuti inosangana nemasabolism uye kuora mwoyo sezvo ichipfuura nepakati chekudya uye chiropa.
Shanduro yeNMN inonyatsopindira kupinda muropa risina mafiritsi. Kubata kwemaitiro emutambo uyu wekusununguka inenge kaviri pane imwe nguva kupfuura kunyorwa kwezwi. Muchiitiko ichi, iwe unofanira kuwedzera dhigi kuti uite wekutanga kudarika metabolism muropa. Kana uchifunga kuti uri kutsvakurudza, ungada nicotinamide mononucleotide yakawanda yeupfu kuti iwe upedze kudzidza.
Icho Chikamu Chokubata KwaNicotinamide Mononucleotide Unofanira Kuziva
Chaizvoizvo zvakafanana neavo vanoratidzwa niacinamide uye imwe vhitamini B3 compoundnicotinamide mononucleotide mhedzisiro s. Nekudaro, vanhu vazhinji havana kana kumbovaona ivo zvachose. Semuenzaniso, wepamusoro weHarvard University musayendisiti anobvuma kutora NMN, asi haana kuona chero kugogodza-pamhedzisiro.
Kusvika ikozvino, muNicotinamide Mononucleotide yose inoshandiswa kushanda pamakonzo, hapana ruzivo runoratidza kuvepo kwezvimwe zvinokonzera mumakorini emurine. Hapana muongorori akanyora chiratidzo chisina kunaka zvose munguva pfupi uye kwenguva refu NMN kutonga.
Vamwe vanhu vanogona kuongorora zvinotevera zvisina kunaka;
Kurwisa kweAirgic yakadai seyechiness, mikoko, kana rashes
Muzviitiko zvisingaiti, nicotinamide mononucleotide migumisiro inogona kuva yakaoma kusvikira iwe uchida kutsvaga hutano hunotarisa. Kutaura matambudziko mashomanana, kufema, kusagadzikana kwepfungwa, kushambidzika kusingagumi, ganda rinomucheka, uye kurasikirwa kwechido ndechimwe chezviratidzo zvakaoma.
Kusvika pano, kuongororwa kwekliniki kwave kuine hutano kune vanhu vakuru vane hutano muzera rechikwere che 45 kusvika kune makore 75. Nokuda kwechikonzero ichi, mapoka anotevera anofanira kunge akangwarira asati agadzirisa NMN anti-aging supplement.
Vakaberekwa uye vanoyamwisa vanaamai
Vanhu vane nhoroondo ye hypersensitivity kune NMN
Varwere vanotora mishonga yezvirwere zvisingaperi
Ndekupi Ndingawana Dambudziko Rokurwisa Dzakarera-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?
(1) NMN Zvokudya Sources
Iwe unenge uchida kukakavadzana kuti nei uchifanira kutenga Nicotinamide Mononucleotide apo iwe unogona kuzviwana nyore nyore mune zvimwe zvokudya. Rega ndikuratidze muchidimbu kuti sei ichi chiwedzere ichikosha.
Sezvo NAD + inoderera mumuviri nekuda kwekwegura, masero haazokwanisi kurwisa. Panguva ino, sarudzo yako chete inogona kunge iri kushandisa NMN kuwedzera. Vanachiremba vanokukurudzira iwe kutora zvinodhaka zveNMN zvakadai se broccoli, mushroom, edamame, kana shrimp. Zvisinei, kudya uku kunongopa zvishoma pane 5% yezvinoda muviri wako.
FDA inokurudzira kuti chero munhu aripo anoda zvishoma ne560mg yeNMN pazuva. Tichifunga kuti iwe uchatora rubatsiro kubva ku broccoli, unofanira kutora mapaundi ane 1500 akafanana.
(2) NMN Zvinyorwa
The nicotinamide mononucleotide bulk powder inowanika kutengeswa mumasitadhi akawanda emishonga nemishonga kana laboratories. Kana iwe uchida zvimwe zvekutsvakurudza kwako, unogona kuita urongwa hwehuwandu, hunouya nekutengesa mitengo uye kuregererwa pamatoro ekutakura.
Kuita zvekutengesa kuIndaneti kweNMN hakusi kungoponesa nguva yako asi kunopawo nzvimbo yakanakisisa yekuenzanisa nemitengo yakasiyana. Kana iwe hausi muongorori, unogona kutenga Nicotinamide Mononucleotide zvokuwedzera nekuda kwekushandisa. Usati waita urongwa, iva nechokwadi chokuti iri chigadzirwa chezvokudya.
Zvinonzwisisika hazvina musoro kutaura kuti NMN inowedzera upenyu hwevanhu. Zvisinei, kutaura uku kwakasimudza. Chikonzero chekufa pakati pevakwegura ndechekuda kwehutano-hutachiona, hunovapo semagumisiro emagetsi emagetsi.
The Kurwisa-kukwegura Nicotinamide Mononucleotide inongopinda mukunatsiridza mafaira emagetsi uye kusimbisa kushanda kwemasero. Inoshanda nekugadzirisa NAD +, iyo inowanzoperera sezvatinenge takura.
Kushandisa kushungurudza chiso chemavara, mashuzha, sunscreens, kana kutanga maitiro ekugara uchidya zvine utano kungangochinja chiso chako. Zvisinei, iwe unoda kunzwisisa chinokonzera kukwegura kwekushungurudza kuti utarise ivo pachavo. Nicotinamide mononucleotide inodzosera kukwegura nekugadzirisa DNA yakaora, kuchengetedza uropi, chirwere chemoyo, kuvandudza mishonga, nekuwedzera kutsungirira.
Kana iwe uchida nicotinamide mononucleotide yakawanda poda, tarisa mukati medu uye unakidzwe nemitengo yakanaka.
RAW KUFANANA UPFU (1094-61-7).
2.Chishamiso Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
3.Nicotinamide Mononucleotide uye NAD +
4.Utsvagurudzo rweNicotinamide Mononucleotide Shanda pane Makonzo
5. Zvakanakira kubva kuNicotinamide Mononucleotide (NMN)
6.No Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Inonyatso Shanda Pamunhu?
7.Ungashandise Sei Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Ye Kurwisa-Kukwegura?
8.Rutivi Rutivi rweNicotinamide Mononucleotide Iwe Unofanirwa Kuziva
9.Ndingawanepi Kwangu Kurwisa-Kuchembera Mishonga-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)?